मिडिया हाउसले पत्रकार निकाल्ने बेला होइन: डा. महत – Karnalisandesh
मिडिया हाउसले पत्रकार निकाल्ने बेला होइन: डा. महत
प्रकाशित मितिः २७ असार २०७७, शनिबार १४:०३ July 11, 2020
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशसरण महतले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्।
शनिबार राजधानीकाे थापागाउँ स्थित नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकारहरुलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण कार्यक्रममा बोल्दै डा.महतले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
यूनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा डा. महतले भने, ‘ओलीजीको सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल त भयो नै, आज नेकपाका अन्य नेताहरुले उहाँको राजिनामा मागिरहेको छ। ओलीजिलाई बिस्तापित गरेर आउन चाहनेहरुले जनताको पक्षमा बोलेको सुनिदैन। सरकारले गरेका गैर कानूनी कार्यका विरुद्धमा बोलेको सुनिदैन। ढिलोचाडो असफलहरु जनताको बीचमा नाङ्गिन्छ्न्।’
उनले अगाडि भने, ‘कोभिड-१९ झ्न व्यापक बन्दैछ। हालै स्वास्थ मन्त्रालयमा पुगेको थिए। मन्त्रालयको तथाङ्क झन कहाली लाग्दो छ। केही दिन पहिले टेकु अस्पताल पुगेको थिए। त्यहाँ राज्यको माथिल्लो निकायका कोही पनि मानिस पुगेको रहेनछ। मन्त्री अरुको के कुरा स्वास्थ्य विभागका हाकिमसमेत अस्पतालमा पुगेको देखिएन। टेकुमा जनताहरु कोरोना परिक्षणको लागि लामो लाइन बसिरहेका छन्। कोरोना परिक्षणलाई सरकार ब्यबस्थापन गरेको छैन।’
साथै नेता महतले भारतबाट आएका मानिसहरुलाई सुरुमै देश भित्रिन दिएको भए कोरोना संक्रमण यसरी नफैलिने दाबी गरे। उनले भने, ‘भारतबाट स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीहरुलाई स्वदेश प्रवेश दिएको भए आजको दिन आउने नै थिए। कोरोना रोक्ने नाममा नेपालीहरुलाई महिनौ दिनसम्म सीमा नाकामा रोकियो। जनताको पीडामा सरकार संसेदनशील भएन। सत्ता भोकचलनमा ब्यस्त भयो। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भया।’
डा. महतले रेमिट्यान्स गुमेको भन्दै अर्थतन्त्र तहसनहस हुने सम्भावना रहेको बताए। उनले भने, ‘लाखौं बेरोजगार सिर्जना भयो। करिब तीन वर्ष कोरोना नियन्त्रण नहुने कुराहरु अनुसन्धानले भन्छ। रेमिटेन्स गुमेको छ। देश अत्यन्तै दुःखमा छ। तर, सरकार यस विषयमा गम्भीर छैन। सत्ताका लागि रस्साकस्सी गरिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री तातो पानी र बेसारको हलवा दिएर जगहसाउदै हुनुहुन्छ।’
मिडियाहरुले अहिले पत्रकार निकाल्ने बेला होइन
नेता महतले कोरोनाको कारण देखाउदै मिडिया हाउसलहरुले कामदार एवं पत्रकारहरुलाई जागिरबाट निकाल्न नहुने बताएका छन्। साथै उनले यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
सबै क्षेत्रको हालत समान भएको बताउदै नेता महतले महामारीको सामना गर्नको लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘महामारीको सामना गर्नको लागि सबैले जिम्मेवारी बाढ्नुपर्छ। संकटलाई टार्नको लागि एउटा पक्षले मात्रै सक्तैन। पत्रकारकोसमेत यो हालत छ। यो बेला सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। रोजगार गुमाएकाहरुलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्ने? सरकारले भाडा नउठाउ भन्छ। बैंकलाई ब्याज नलेउ भनेर भन्छ तर, सरकारले जिम्मेवार लिदैन।’
उनले अगाडि भने, ‘सबैले यो संकट टार्न सबैले जिम्मेवारी बाढ्नुपर्छ। मल सञ्चालक, उघोग कलकारखाना, मिडाया हाउसले सेवागर्छु, कमाउदिन भन्नू पर्यो। काम गर्नेले पनि आफ्नो तोकेकै तलब लिन्छु भन्नू भएन। सबैले जिरो नाफामा बाँच्न सक्नुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले यसको जिम्मा लिनुपर्छ। साझा दायित्वले मात्र कोरोन जितिन्छ। काङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै यो आग्रह गरेको छ।’
उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पत्रकारको ब्यबस्थापन, गर्नमा कसैलाई, सरकारले जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ। समाचार संकलनमा खटिने पत्रकारलाई सरकारले हेर्नुपर्छ। अस्पताल, क्वारेन्टाइन, बेरोजगार, कोरोनाको अवस्थाको बारेमा सूचना संकलनमा खटिनेलाई सरकारले भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ।’
उनले अगाडि भने, ‘हटाउन पाइदैन। सञ्चार स्वतन्त्रतामाथी सरकार समाप्त पार्ने काम गर्दैछ। सरकार स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथी कुण्ठित गर्दैछ। आलोचना गर्ने पत्रकार त देख्नै सक्दैन। नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता कसैले खोस्न सक्दैन। नेकपा स्वतन्त्र अभिव्यक्त मन पराउदैन। तर, कुण्ठित गर्न कसैले चाहेको छ भने त्यो पूरा गर्न काङ्ग्रेसले दिदैन, नेपाली जनताले दिदैन।’